Hordhaca Shirkadda - Guangzhou Airwoods Environment Technology Co., Ltd.
Balanteenu waa inaan siino macaamiisheena tayada ugu sareysa
adeegyada iyo badeecadaha qiimo jaban.
Hawada waa shirkad caalami ah oo horseed u ah kuleylka wax ku oolka ah ee kuleylka, hawo-siinta iyo wax soo saarka qaboojiyaha iyo dhameystirka xalalka HVAC ee suuqyada guryaha, ganacsiga iyo warshadaha.
Waxaan u heellanay horumarinta cilmi baarista iyo teknolojiyada ee qaybaha ka soo kabashada tamarta iyo nidaamka xakamaynta caqliga in ka badan 19 sano. Waxaan haynaa koox aad u xoog badan oo R&D ah oo uruursanaysa in kabadan 50 sano oo khibrad ah warshadaha, waxayna leeyihiin daraasiin shatiyo sanad walba.
Waxaan haynaa in ka badan 50 farsamoyaqaano khibrad leh oo ku takhasusay HVAC iyo naqshadaynta qolka nadiifinta ee loogu talagalay dalabka warshadaha kala duwan. Sannad kasta, waxaan dhameystirnaa in ka badan 100 mashruuc oo dalal kala duwan ka socda. Kooxdayadu waxay ku siin karaan xalal dhammaystiran HVAC oo ay ka mid yihiin la-taliyaha mashruuca, qaabeynta, keenista qalabka, rakibaadda, tababarka, dayactirka, iyo xitaa mashaariicda loo yaqaan 'turnkey' si loo waafajiyo baahiyaha macaamiisha kala duwan.
Waxaan higsaneynaa inaan adduunka u gaarsiino tayada hawada wanaagsan ee leh wax soo saarka tamarta, xalalka lafilayo, qiimaha qiimaha badan iyo adeegyo waawayn macaamiisheena.
Nidaamka La Tashiga & Hirgelinta
Bixiyaan adeegyo la-talin iyo soo-jeedin, xulashada badeecada iyo sawiro naqshadeyn ah iyadoo la raacayo mashaariicda.
Nidaamka Xalka & Qalabka
Bixiyaan xalal filaayo leh naqshadeynta, soo iibsiga, gaadiidka, rakibaadda, tababarka iyo howlaha howlaha
Rakibaadda Badweynta & Komishanka
Kooxda rakibaadda Airwoods waxay leeyihiin dhisme ballaadhan oo goobta ah, rakibid iyo khibrad shaqo.
Tababarka Hawlgalka & Adeegga Iibinta Kadib
Bixinta tababar xirfadeed si ay uga caawiso macaamiisha inay si wanaagsan u maareeyaan nidaamkooda, yareeyaan cilladda ayna u dheereeyaan waqtiga adeegga mashiinka.
Xalka Nadiifinta GMP
Dhismooyinka Ganacsiga xalalka HVAC
Xalalka casriga ah ee Beeraha HVAC
Dhismaha Waxbarashada HVAC
Xalka Dhismaha HVAC